ရဲရင့်တဲ့စပါတန်စစ်သည်တစ်ယောက်အဖြစ် အမှန်တရားကို ရှာဖွေရမယ့် Assassin’s Creed: Odyssey
ဂိမ်မာတွေအားလုံး ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာ စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ E3 ဂိမ်းပွဲတော်ကြီးကတော့ အားလုံးနဲ့လက်တကမ်းမှာရှိနေပါပြီ။ ဇွန်လ ၁၁ မှာစတင်ကျင်းပမှာဖြစ်တဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ရဲ့ E3 ပွဲမှာ ကမ္ဘာ့နယ်ပယ်အသီးသီးက နာမည်ကျော်ဂိမ်းကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ဂိမ်းဖန်တီးထုတ်လုပ်သူတွေဟာ ဂိမ်မာတွေအားလုံးမျှော်လင့်နေကြတဲ့ အပြောင်မြောက်ဆုံး ဂိမ်းကောင်းဂိမ်းသစ်တွေကို ကိုယ့်ရဲ့အချိန်ဇယားနဲ့အလိုက် ထုတ်ဖော်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ စွဲမက်စရာကောင်းတဲ့ မှင်သက်ဖွယ် ဂိမ်းထွေလာတွေ၊ ဂိမ်းအသစ်ရဲ့သူမတူတဲ့ ကစားဟန်တွေ၊ အားလုံးမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဂိမ်းအသစ် ကြေညာချက်တွေ အစရှိတာတွေဟာ ဂိမ်မာတွေအသည်းထဲစွဲစေတဲ့ E3 ပွဲရဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲမှာ မျိုးဆက်သစ်ဂိမ်းတွေကို ထုတ်ဖော်ပြသလေ့ရှိသလို အရင်နှစ် E3 ပွဲတွေမှာ အမြည်းချပြခဲ့တဲ့ဂိမ်းသစ်တွေရဲ့ နောက်ထပ်ထွေလာအသစ်တွေနဲ့ တရားဝင်ထွက်ရှိမယ့်ရက်စွဲတွေကို အတိအလင်းကြေညာချက်တွေ ထုတ်ပြန်ကြပါတယ်။ ဂိမ်းကိုချစ်တဲ့ဂိမ်မာတွေသာမက ဂိမ်းဖန်တီးထုတ်လုပ်တဲ့ဂိမ်းကုမ္ပဏီတွေပါ တညီတညွတ်တည်း တက်ရောက်ကြတဲ့ အခုနှစ် E3 ပွဲမှာလည်း အားလုံး ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားစေမယ့် အမိုက်စားဂိမ်းအသစ်တွေ ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီလို ဂိမ်းသစ်တွေထဲက တစ်ခုကတော့ Ubisoft ဂိမ်းကုမ္ပဏီရဲ့အအောင်မြင်ဆုံးဂိမ်းစီးရီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Assassin’s Creed ရဲ့ ဂ်ိမ်းသစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ AC စီးရီးတွဲရဲ့နောက်ဆုံးအခွေဖြစ်တဲ့ Origins အခွေဟာ ယမန်နှစ် အောက်တိုဘာလမှာထွက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး Ubisoft အတွက်အောင်မြင်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုကို ဆွတ်ခူးပေးခဲ့တဲ့ဂိမ်းလို့ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ Origins နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဂိမ်းသတင်းနဲ့ အကြောင်းအရာတွေဟာ အခုအချိန်ထိ ဂိမ်မာတွေကြားထဲမှာ ပြောမဆုံးဘဲဖြစ်နေပေမယ့် ခြေလှမ်းတွေသွက်တဲ့ Ubisoft အနေနဲ့ တစ်နှစ်တောင်မပြည့်သေးတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာ Odyssey လို့အမည်ရတဲ့ နောက်ထပ် AC ဂိမ်းသစ်ကို အပြီးသတ်ဖန်တီးရေးဆွဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီသတင်းကိုသိသိရချင်းပဲ ဂိမ်မာတွေအားလုံး မှင်သက်အံ့သြသွားရသလို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း Ubisoft ရဲ့မြန်ဆန်လှတဲ့ ဂိမ်းဖန်တီးမှုအဆင့်ဆင့်ကို ကြည့်ပြီး ဝေခွဲရခက်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Capcom အနေနဲ့ Devil May Cry5ဂိမ်းသစ်ကိုထုတ်ပေးဖို့ ဆယ်နှစ်နီးပါးအချိန်ယူခဲ့ရပြီး Ubisoft ကတော့ တစ်နှစ်မပြည့်တဲ့အချိန်အတွင်းမှာ Odyssey ဆိုတဲ့ AC ဂိမ်းအသစ်ကို ချပြနိုင်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ မကြာခင်လာတော့မယ့် E3 ပွဲမှာတွေ့ရမယ့် Assassin’s Creed: Odyssey ဂိမ်းအသစ်ဟာ ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ? ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ ကစားဟန်အသစ်တွေကို ထည့်သွင်းထားလဲ? ဇာတ်အိမ်တည်ထားတဲ့သမိုင်းကြောင်းနဲ့ ဂိမ်းပတ်ဝန်းကျင်ကရော ဘယ်လိုရှိလဲ? အစရှိတာတွေကို ဂိမ်မာတွေအားလုံးသိရှိစေဖို့ သိရသမျှအချက်တွေစုစည်းပြီး ဒီစာစောင်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဂ်ိမ်းရဲ့ဇာတ်အိမ်တည်ရာ ရှေးခေတ်ဂရိမြို့နဲ့ စပါတန်စစ်သူရဲကောင်းတွေ
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း AC ဂိမ်းတိုင်းဟာ ကမ္ဘာ့သမိုင်းတစ်လျှောက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ နာမည်ကျော်စစ်ပွဲကာလတွေအပေါ်မှာ ဇာတ်အိမ်တည်လေ့ရှိပါတယ်။ Assassin တစ်ယောက်အနေနဲ့ AC ဂိမ်းတိုင်းမှာကိုယ်ရင်ဆိုင်ရတဲ့ ရန်သူတွေဟာ သမိုင်းကြောင်းတွေထဲမှာ တကယ်ရှိခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ Ubisoft အနေနဲ့ AC ဂိမ်းတွေကို ရောမခေတ်၊ ပြင်သစ်၊ လန်ဒန်၊ အမေရိကန်နဲ့ ကာရီဘီယန်ကျွန်းစုတွေအထိ ဇာတ်ကြောင်းဖြန့်ကျက်ခဲ့ပြီး အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ နာမည်ကျော်စပါတန်စစ်သည်တွေ မွေးဖွားရာနေရပ်ဖြစ်တဲ့ ရှေးခေတ်ဂရိမြို့မှာ ဇာတ်အိမ်တည်ထားပါတယ်။ ကိုယ်ဟာ Assassin တစ်ယောက်ဖြစ်မလား? စပါတန်စစ်သည်တစ်ယောက်ဖြစ်မလားဆိုတာကတော့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်စောင့်ကြည့်ရမှာပါပဲ။
AC စီးရီးရဲ့ ရှိရင်းစွဲဂိမ်းကစားဟန်ထဲကနေ ကွဲထွက်မယ့် ဂိမ်းပုံစံအသစ်
နောက်ဆုံးထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Assassin’s Creed: Origins ခွေမှာ နဂိုမူလရှိခဲ့တဲ့ဂိမ်းကစားဟန်ထဲကနေ ကွဲပြားတဲ့ ဂိမ်းတွင်းလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်တွေကို ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ လက်နက်ဖန်တီးတာတွေ၊ ရန်သူ့ဆီချဉ်းကပ်မှုပုံစံအသစ်တွေနဲ့ အတိုက်အခိုက်လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ပုံစံအသစ်တစ်ခုဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲထားပါတယ်။ AC Rogue အခွေကနေစပြီး Origins အထိ တစတစပြောင်းလဲလာခဲ့တဲ့ ဂိမ်းကစားဟန်အပေါ်မှာ ဂိမ်မာအချို့အသားမကျကြသလို ပိုမိုကောင်းမွန်လာတယ်လို့ယူဆတဲ့ ဂိမ်မာတွေလည်းရှိပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ အသေအချာမသိရသေးပေမယ့် Origins အခွေမှာလိုအပ်ခဲ့တဲ့ ဂိမ်းတွင်းလုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်မွန်းမံပြီး အခုလာမယ့် Odyssey မှာ ထည့်သွင်းသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။
ကြေးစားလုပ်ကြံသူဘဝကနေ ကြီးမြတ်တဲ့ စပါတန်စစ်သည်တစ်ယောက်အဖြစ်သို့
Odyssey ဆိုတဲ့စကားလုံးကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရမယ်ဆိုရင် “ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ခရီးရှည်” လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဂိမ်းရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်အနေနဲ့ ရှေးခေတ်ဂရိမြို့မှာ ဘယ်လိုမျိုးကြမ်းတမ်းခက်ထန်တဲ့ ခရီးလမ်းကိုဖြတ်သန်း လျှောက်လှမ်းခဲ့ရသလဲဆိုတာကတော့ အားလုံးစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကိုအကျဉ်းချူပ်ဖော်ပြထားတဲ့ စာပိုဒ်အရတော့ “ကိုယ့်ကံကြမ္မာရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင်က ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ဘဝခရီးလမ်းတစ်လျှောက်မှာ ကြီးမြတ်တဲ့စပါတန်စစ်သည်တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက် ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ်ရေးရမယ်။ စွန့်စားခန်းတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ ဒီလမ်းခရီးမှာ ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်သမျှဟာ အသက်တမျှအရေးပါတယ်။ အတိတ်က အမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ဖို့အတွက် မိသားစုရဲ့ပစ်ပယ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့ ကြေးစားလူသတ်သမားဘဝကနေ စပါတန်စစ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်လာရမယ်” လို့ဆိုထားတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာပိုဒ်အရဆိုရင် ဂိမ်းအတွင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးရမယ့် ဂိမ်းစနစ်ပါဝင်မယ်လို့ ယူဆနိုင်ပြီး RPG ပိုဆန်လာစေအောင် လွတ်လပ်တဲ့ရွေးချယ်မှုစနစ်ပါဝင်လာတဲ့အပြင် ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မူတည်ပြီး ဇာတ်အိမ်ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေအရ ဒီ Odyssey အခွေဟာ AC စီးရီးထဲမှာမှ လုံးဝကိုကွဲထွက်တဲ့ကစားဟန်နဲ့ အရသာသစ်ကိုပေးစွမ်းမယ့်အခွေဖြစ်တယ်လို့ ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။
စပါတန်သမိုင်းကြောင်းကိုပြန်လည်ထင်ဟပ်မယ့် ဇာတ်ကွက်တွေနဲ့ ရာဇဝင်တွင်မစ်ရှင်တွေ
ရှေးခေတ်ဂရိမြို့နဲ့ စပါတန်စစ်သည်တွေကို အခြေပြုပြီးရိုက်ကူးဖန်တီးထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေနဲ့ ဂိမ်းပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။ တုနှိုင်းမရတဲ့ ရဲစွမ်းသတ္တိ၊ တစ်ဖက်ကမ်းခပ်ကျွမ်းကျင်တဲ့စစ်ပညာ၊ သူ့ကျွန်မခံလိုတဲ့မျိုးချစ်စိတ်နဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်မှုတို့ဟာ စပါတန်စစ်သည်တွေရဲ့ ဖျောက်ဖျက်မရတဲ့ဗီဇဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Odyssey အခွေဟာ ကွဲပြားတဲ့ဂိမ်းကစားဟန်ကို ထည့်သွင်းထားရုံတင်မကဘဲ လုပ်ကြံသူအဖြစ်ကနေ စစ်သည်တစ်ယောက်ဖြစ်လာမယ့် ဇာတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက် အားလုံးနဲ့မတူ ကွဲထွက်နေတာတော့ အမှန်ပါ။ ရန်သူရဲ့စစ်စခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနင်းတာတွေ၊ အကျဉ်းသားသုံ့ပန်းတွေကို သွားရောက်ကယ်တင်တာတွေ ပါဝင်လာဖို့ သေချာနေတဲ့အပြင် ဇာတ်ကြောင်းဟာ သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်နာမည်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ စပါတန်တွေနဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့အတွက် အရင်ဘယ်လို AC ခွေနဲ့မှ မတူနိုင်ဘူးဆိုတာတော့ ကြိမ်းသေနေပါတယ်။
Odyssey နဲ့ပတ်သက်ပြီး သိရသမျှနဲ့ အကျဉ်းချူပ်
ဒီအခွေဟာ အရင် AC ဂိမ်းတွေလို Assassin နဲ့ Templar ကြားက ပြင်းထန်လှတဲ့ပဋိပက္ခတွေကို မီးမောင်းထိုးပြမှာ ဟုတ်ရဲ့လားလို့တောင် မေးခွန်းထုတ်ချင်စရာပါ။ ယမန်နေ့ကမှ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့ Odyssey အခွေရဲ့ ဂိမ်းတွင်း screenshot တွေအရတော့ ကိုယ်ဟာ Assassin တစ်ယောက်ရဲ့သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်းဝတ်စုံနဲ့ လုပ်ကြံတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့ လျှို့ဝှက်ဓားမြောင်တို့ကို မဆင်မြန်းထားတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအစား စပါတန်စစ်ဝတ်စုံကိုဝတ်ပြီး Assassin တစ်ယောက်လို အဆောက်အဦးတွေရဲ့အပေါ်မှာ သွက်လက်စွာ ပြေးလွှားသွားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်သည်တစ်ယောက်ဖြစ်လာမယ့် လုပ်ကြံသူတစ်ယောက်ရဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ဘဝခရီးလမ်းရှည်ကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာအတော်လေးကောင်းနေပါပြီ။ Ubisoft ကနေနောက်ထပ်ပြီး Odyssey နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဘယ်လိုမျိုးအရာတွေချပြဦးမလဲဆိုတာကတော့ စောင့်ကြည့်နေရမှာပါပဲ။ E3 ပွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ ဒီထက်ပိုပြီး လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြစရာရှိလာမယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ ဒီ Odyssey အခွေကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်ရဲ့ E3 ပွဲမှာ ပထမဦးဆုံးထုတ်ဖော်ပြသမှာဖြစ်ပေမယ့်လည်း ၂၀၁၉ နှစ်စပိုင်း ဒါမှမဟုတ် နှစ်လယ်ပိုင်းလောက်မှာမှ တရားဝင်ထွက်ရှိလာဖို့ အလားအလာများပါတယ်။ ဒီတော့ AC ပရိသတ်များအနေနဲ့ ဒီစာစောင်ကိုဖတ်ပြီး Odyssey အကြောင်းတစေ့တစောင်းနဲ့ သိလိုတာတွေကို သိသွားလောက်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ E3 ပွဲကြီးကိုရောက်ဖို့က အချိန်ဘယ်လောက်မှမကျန်တော့တဲ့အတွက် ဒီစာစောင်လေးဖတ်ပြီး လာမယ့် E3 ပွဲကိုစောင့်ဆိုင်းရင်း ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေလိုက်ကြပါဦးလို့ ဒီကနေပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ဂိမ်းဆောင်းပါးတွေမှာလည်း ပြန်လည်တွေ့ဆုံရဖို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
Ref: Gamespot, Kotaku, Forbes
ဂိမျမာတှအေားလုံး ရငျခုနျစိတျလှုပျရှားစှာ စောငျ့မြှျောနကွေတဲ့ E3 ဂိမျးပှဲတျောကွီးကတော့ အားလုံးနဲ့လကျတကမျးမှာရှိနပေါပွီ။ ဇှနျလ ၁၁ မှာစတငျကငျြးပမှာဖွဈတဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှဈရဲ့ E3 ပှဲမှာ ကမ်ဘာ့နယျပယျအသီးသီးက နာမညျကြျောဂိမျးကုမ်ပဏီတှနေဲ့ ဂိမျးဖနျတီးထုတျလုပျသူတှဟော ဂိမျမာတှအေားလုံးမြှျောလငျ့နကွေတဲ့ အပွောငျမွောကျဆုံး ဂိမျးကောငျးဂိမျးသဈတှကေို ကိုယျ့ရဲ့အခြိနျဇယားနဲ့အလိုကျ ထုတျဖျောပွသသှားမှာဖွဈပါတယျ။ စှဲမကျစရာကောငျးတဲ့ မှငျသကျဖှယျ ဂိမျးထှလောတှေ၊ ဂိမျးအသဈရဲ့သူမတူတဲ့ ကစားဟနျတှေ၊ အားလုံးမမြှျောလငျ့ထားတဲ့ဂိမျးအသဈ ကွညောခကျြတှေ အစရှိတာတှဟော ဂိမျမာတှအေသညျးထဲစှဲစတေဲ့ E3 ပှဲရဲ့အခနျးကဏ်ဍတှေ ဖွဈပါတယျ။ ပှဲမှာ မြိုးဆကျသဈဂိမျးတှကေို ထုတျဖျောပွသလရှေိ့သလို အရငျနှဈ E3 ပှဲတှမှော အမွညျးခပြွခဲ့တဲ့ဂိမျးသဈတှရေဲ့ နောကျထပျထှလောအသဈတှနေဲ့ တရားဝငျထှကျရှိမယျ့ရကျစှဲတှကေို အတိအလငျးကွညောခကျြတှေ ထုတျပွနျကွပါတယျ။ ဂိမျးကိုခဈြတဲ့ဂိမျမာတှသောမက ဂိမျးဖနျတီးထုတျလုပျတဲ့ဂိမျးကုမ်ပဏီတှပေါ တညီတညှတျတညျး တကျရောကျကွတဲ့ အခုနှဈ E3 ပှဲမှာလညျး အားလုံး ပါးစပျအဟောငျးသားဖွဈသှားစမေယျ့ အမိုကျစားဂိမျးအသဈတှေ ရှိနပေါတယျ။ အဲဒီလို ဂိမျးသဈတှထေဲက တဈခုကတော့ Ubisoft ဂိမျးကုမ်ပဏီရဲ့အအောငျမွငျဆုံးဂိမျးစီးရီးတဈခုဖွဈတဲ့ Assassin’s Creed ရဲ့ ဂိမျးသဈပဲဖွဈပါတယျ။
ဟုတျပါတယျ၊ AC စီးရီးတှဲရဲ့နောကျဆုံးအခှဖွေဈတဲ့ Origins အခှဟော ယမနျနှဈ အောကျတိုဘာလမှာထှကျရှိလာခဲ့တာဖွဈပွီး Ubisoft အတှကျအောငျမွငျမှုအတိုငျးအတာတဈခုကို ဆှတျခူးပေးခဲ့တဲ့ဂိမျးလို့ဆိုရငျလညျး မမှားပါဘူး။ Origins နဲ့ပတျသကျတဲ့ ဂိမျးသတငျးနဲ့ အကွောငျးအရာတှဟော အခုအခြိနျထိ ဂိမျမာတှကွေားထဲမှာ ပွောမဆုံးဘဲဖွဈနပေမေယျ့ ခွလှေမျးတှသှေကျတဲ့ Ubisoft အနနေဲ့ တဈနှဈတောငျမပွညျ့သေးတဲ့အခြိနျကာလအတှငျးမှာ Odyssey လို့အမညျရတဲ့ နောကျထပျ AC ဂိမျးသဈကို အပွီးသတျဖနျတီးရေးဆှဲနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဒီသတငျးကိုသိသိရခငျြးပဲ ဂိမျမာတှအေားလုံး မှငျသကျအံ့သွသှားရသလို ကြှနျတျောကိုယျတိုငျလညျး Ubisoft ရဲ့မွနျဆနျလှတဲ့ ဂိမျးဖနျတီးမှုအဆငျ့ဆငျ့ကို ကွညျ့ပွီး ဝခှေဲရခကျခဲ့ပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ နှိုငျးယှဉျကွညျ့မယျဆိုရငျ Capcom အနနေဲ့ Devil May Cry5ဂိမျးသဈကိုထုတျပေးဖို့ ဆယျနှဈနီးပါးအခြိနျယူခဲ့ရပွီး Ubisoft ကတော့ တဈနှဈမပွညျ့တဲ့အခြိနျအတှငျးမှာ Odyssey ဆိုတဲ့ AC ဂိမျးအသဈကို ခပြွနိုငျခဲ့လို့ဖွဈပါတယျ။ ဒီတော့ မကွာခငျလာတော့မယျ့ E3 ပှဲမှာတှရေ့မယျ့ Assassin’s Creed: Odyssey ဂိမျးအသဈဟာ ဘယျလိုဖွဈမလဲ? ဘယျလိုမြိုးပွောငျးလဲမှုတှနေဲ့ ကစားဟနျအသဈတှကေို ထညျ့သှငျးထားလဲ? ဇာတျအိမျတညျထားတဲ့သမိုငျးကွောငျးနဲ့ ဂိမျးပတျဝနျးကငျြကရော ဘယျလိုရှိလဲ? အစရှိတာတှကေို ဂိမျမာတှအေားလုံးသိရှိစဖေို့ သိရသမြှအခကျြတှစေုစညျးပွီး ဒီစာစောငျမှာ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
ဂိမျးရဲ့ဇာတျအိမျတညျရာ ရှေးခတျေဂရိမွို့နဲ့ စပါတနျစဈသူရဲကောငျးတှေ
အားလုံးသိကွတဲ့အတိုငျး AC ဂိမျးတိုငျးဟာ ကမ်ဘာ့သမိုငျးတဈလြှောကျဖွဈပှားခဲ့တဲ့ နာမညျကြျောစဈပှဲကာလတှအေပျေါမှာ ဇာတျအိမျတညျလရှေိ့ပါတယျ။ Assassin တဈယောကျအနနေဲ့ AC ဂိမျးတိုငျးမှာကိုယျရငျဆိုငျရတဲ့ ရနျသူတှဟော သမိုငျးကွောငျးတှထေဲမှာ တကယျရှိခဲ့ကွသူတှဖွေဈပါတယျ။ Ubisoft အနနေဲ့ AC ဂိမျးတှကေို ရောမခတျေ၊ ပွငျသဈ၊ လနျဒနျ၊ အမရေိကနျနဲ့ ကာရီဘီယနျကြှနျးစုတှအေထိ ဇာတျကွောငျးဖွနျ့ကကျြခဲ့ပွီး အခုတဈခေါကျမှာတော့ နာမညျကြျောစပါတနျစဈသညျတှေ မှေးဖှားရာနရေပျဖွဈတဲ့ ရှေးခတျေဂရိမွို့မှာ ဇာတျအိမျတညျထားပါတယျ။ ကိုယျဟာ Assassin တဈယောကျဖွဈမလား? စပါတနျစဈသညျတဈယောကျဖွဈမလားဆိုတာကတော့ စိတျဝငျစားဖှယျစောငျ့ကွညျ့ရမှာပါပဲ။
AC စီးရီးရဲ့ ရှိရငျးစှဲဂိမျးကစားဟနျထဲကနေ ကှဲထှကျမယျ့ ဂိမျးပုံစံအသဈ
နောကျဆုံးထှကျရှိခဲ့တဲ့ Assassin’s Creed: Origins ခှမှော နဂိုမူလရှိခဲ့တဲ့ဂိမျးကစားဟနျထဲကနေ ကှဲပွားတဲ့ ဂိမျးတှငျးလုပျဆောငျခကျြအသဈတှကေို ထညျ့သှငျးထားပါတယျ။ လကျနကျဖနျတီးတာတှေ၊ ရနျသူ့ဆီခဉျြးကပျမှုပုံစံအသဈတှနေဲ့ အတိုကျအခိုကျလုပျဆောငျခကျြတှကေို ပုံစံအသဈတဈခုဖွဈအောငျ ပွောငျးလဲထားပါတယျ။ AC Rogue အခှကေနစေပွီး Origins အထိ တစတစပွောငျးလဲလာခဲ့တဲ့ ဂိမျးကစားဟနျအပျေါမှာ ဂိမျမာအခြို့အသားမကကြွသလို ပိုမိုကောငျးမှနျလာတယျလို့ယူဆတဲ့ ဂိမျမာတှလေညျးရှိပါတယျ။ အသေးစိတျကိုတော့ အသအေခြာမသိရသေးပမေယျ့ Origins အခှမှောလိုအပျခဲ့တဲ့ ဂိမျးတှငျးလုပျဆောငျခကျြတှကေို ပွနျလညျပွငျဆငျမှနျးမံပွီး အခုလာမယျ့ Odyssey မှာ ထညျ့သှငျးသှားမယျလို့သိရပါတယျ။
ကွေးစားလုပျကွံသူဘဝကနေ ကွီးမွတျတဲ့ စပါတနျစဈသညျတဈယောကျအဖွဈသို့
Odyssey ဆိုတဲ့စကားလုံးကို အဓိပ်ပါယျဖှငျ့ဆိုရမယျဆိုရငျ “ဖွတျသနျးခဲ့တဲ့ခရီးရှညျ” လို့ဆိုနိုငျပါတယျ။ ဂိမျးရဲ့အဓိကဇာတျကောငျအနနေဲ့ ရှေးခတျေဂရိမွို့မှာ ဘယျလိုမြိုးကွမျးတမျးခကျထနျတဲ့ ခရီးလမျးကိုဖွတျသနျး လြှောကျလှမျးခဲ့ရသလဲဆိုတာကတော့ အားလုံးစောငျ့ကွညျ့ရမှာဖွဈပါတယျ။ ဇာတျလမျးကိုအကဉျြးခြူပျဖျောပွထားတဲ့ စာပိုဒျအရတော့ “ကိုယျ့ကံကွမ်မာရဲ့ ပဲ့ကိုငျရှငျက ကိုယျကိုယျတိုငျပဲဖွဈတယျ။ ကိုယျဖွတျသနျးခဲ့တဲ့ဘဝခရီးလမျးတဈလြှောကျမှာ ကွီးမွတျတဲ့စပါတနျစဈသညျတဈယောကျဖွဈလာဖို့အတှကျ ကိုယျ့သမိုငျးကိုယျရေးရမယျ။ စှနျ့စားခနျးတှနေဲ့ပွညျ့နှကျနတေဲ့ ဒီလမျးခရီးမှာ ကိုယျ့ရဲ့ဆုံးဖွတျခကျြမှနျသမြှဟာ အသကျတမြှအရေးပါတယျ။ အတိတျက အမှနျတရားကိုထုတျဖျောဖို့အတှကျ မိသားစုရဲ့ပဈပယျခွငျးကိုခံခဲ့ရတဲ့ ကွေးစားလူသတျသမားဘဝကနေ စပါတနျစဈသားတဈယောကျဖွဈလာရမယျ” လို့ဆိုထားတာကို တှရေ့မှာဖွဈပါတယျ။ ဒီစာပိုဒျအရဆိုရငျ ဂိမျးအတှငျးမှာ ကိုယျပိုငျဆုံးဖွတျခကျြပေးရမယျ့ ဂိမျးစနဈပါဝငျမယျလို့ ယူဆနိုငျပွီး RPG ပိုဆနျလာစအေောငျ လှတျလပျတဲ့ရှေးခယျြမှုစနဈပါဝငျလာတဲ့အပွငျ ကိုယျ့ဆုံးဖွတျခကျြအပျေါမူတညျပွီး ဇာတျအိမျပွောငျးလဲသှားမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီအခကျြတှအေရ ဒီ Odyssey အခှဟော AC စီးရီးထဲမှာမှ လုံးဝကိုကှဲထှကျတဲ့ကစားဟနျနဲ့ အရသာသဈကိုပေးစှမျးမယျ့အခှဖွေဈတယျလို့ ကောကျခကျြခနြိုငျပါတယျ။
စပါတနျသမိုငျးကွောငျးကိုပွနျလညျထငျဟပျမယျ့ ဇာတျကှကျတှနေဲ့ ရာဇဝငျတှငျမဈရှငျတှေ
ရှေးခတျေဂရိမွို့နဲ့ စပါတနျစဈသညျတှကေို အခွပွေုပွီးရိုကျကူးဖနျတီးထားတဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားတှနေဲ့ ဂိမျးပေါငျးမြားစှာရှိပါတယျ။ တုနှိုငျးမရတဲ့ ရဲစှမျးသတ်တိ၊ တဈဖကျကမျးခပျကြှမျးကငျြတဲ့စဈပညာ၊ သူ့ကြှနျမခံလိုတဲ့မြိုးခဈြစိတျနဲ့ စညျးလုံးညီညှတျမှုတို့ဟာ စပါတနျစဈသညျတှရေဲ့ ဖြောကျဖကျြမရတဲ့ဗီဇဖွဈပါတယျ။ ဒီ Odyssey အခှဟော ကှဲပွားတဲ့ဂိမျးကစားဟနျကို ထညျ့သှငျးထားရုံတငျမကဘဲ လုပျကွံသူအဖွဈကနေ စဈသညျတဈယောကျဖွဈလာမယျ့ ဇာတျကွောငျးဖွဈတဲ့အတှကျ အားလုံးနဲ့မတူ ကှဲထှကျနတောတော့ အမှနျပါ။ ရနျသူရဲ့စဈစခနျးကိုဝငျရောကျစီးနငျးတာတှေ၊ အကဉျြးသားသုံ့ပနျးတှကေို သှားရောကျကယျတငျတာတှေ ပါဝငျလာဖို့ သခြောနတေဲ့အပွငျ ဇာတျကွောငျးဟာ သမိုငျးကွောငျးတဈလြှောကျနာမညျကြျောကွားခဲ့တဲ့ စပါတနျတှနေဲ့ ဆကျနှယျနတေဲ့အတှကျ အရငျဘယျလို AC ခှနေဲ့မှ မတူနိုငျဘူးဆိုတာတော့ ကွိမျးသနေပေါတယျ။
Odyssey နဲ့ပတျသကျပွီး သိရသမြှနဲ့ အကဉျြးခြူပျ
ဒီအခှဟော အရငျ AC ဂိမျးတှလေို Assassin နဲ့ Templar ကွားက ပွငျးထနျလှတဲ့ပဋိပက်ခတှကေို မီးမောငျးထိုးပွမှာ ဟုတျရဲ့လားလို့တောငျ မေးခှနျးထုတျခငျြစရာပါ။ ယမနျနကေ့မှ အငျတာနကျပျေါမှာ ပွနျ့နှံ့ခဲ့တဲ့ Odyssey အခှရေဲ့ ဂိမျးတှငျး screenshot တှအေရတော့ ကိုယျဟာ Assassin တဈယောကျရဲ့သှငျပွငျလက်ခဏာတှဖွေဈတဲ့ ခေါငျးဆောငျးဝတျစုံနဲ့ လုပျကွံတဲ့နရောမှာအသုံးပွုတဲ့ လြှို့ဝှကျဓားမွောငျတို့ကို မဆငျမွနျးထားတာကိုတှမွေ့ငျရမှာဖွဈပါတယျ။ အဲဒီအစား စပါတနျစဈဝတျစုံကိုဝတျပွီး Assassin တဈယောကျလို အဆောကျအဦးတှရေဲ့အပျေါမှာ သှကျလကျစှာ ပွေးလှားသှားလာနတောဖွဈပါတယျ။ စဈသညျတဈယောကျဖွဈလာမယျ့ လုပျကွံသူတဈယောကျရဲ့ဖွတျသနျးခဲ့တဲ့ဘဝခရီးလမျးရှညျကတော့ စိတျဝငျစားစရာအတျောလေးကောငျးနပေါပွီ။ Ubisoft ကနနေောကျထပျပွီး Odyssey နဲ့ပတျသကျတဲ့ ဘယျလိုမြိုးအရာတှခေပြွဦးမလဲဆိုတာကတော့ စောငျ့ကွညျ့နရေမှာပါပဲ။ E3 ပှဲပွီးသှားတဲ့အခြိနျကရြငျတော့ ဒီထကျပိုပွီး လကျဆုပျလကျကိုငျပွစရာရှိလာမယျလို့ ယူဆရပါတယျ။ နောကျတဈခကျြအနနေဲ့ ဒီ Odyssey အခှကေို ၂၀၁၈ ခုနှဈရဲ့ E3 ပှဲမှာ ပထမဦးဆုံးထုတျဖျောပွသမှာဖွဈပမေယျ့လညျး ၂၀၁၉ နှဈစပိုငျး ဒါမှမဟုတျ နှဈလယျပိုငျးလောကျမှာမှ တရားဝငျထှကျရှိလာဖို့ အလားအလာမြားပါတယျ။ ဒီတော့ AC ပရိသတျမြားအနနေဲ့ ဒီစာစောငျကိုဖတျပွီး Odyssey အကွောငျးတစတေ့စောငျးနဲ့ သိလိုတာတှကေို သိသှားလောကျပွီလို့ ထငျပါတယျ။ E3 ပှဲကွီးကိုရောကျဖို့က အခြိနျဘယျလောကျမှမကနျြတော့တဲ့အတှကျ ဒီစာစောငျလေးဖတျပွီး လာမယျ့ E3 ပှဲကိုစောငျ့ဆိုငျးရငျး ရငျခုနျစိတျလှုပျရှားနလေိုကျကွပါဦးလို့ ဒီကနပွေောလိုကျခငျြပါတယျ။ နောကျထပျဂိမျးဆောငျးပါးတှမှောလညျး ပွနျလညျတှဆေုံ့ရဖို့ မြှျောလငျ့မိပါတယျ။